Vahaolana iray hafa ho an'ny olana amin'ny fitaovana USB ao amin'ny Lucid | Avy amin'ny Linux
Vahaolana iray hafa ho an'ny olan'ny fitaovana USB ao Lucid
Toa misy bibikely ao amin'ny Ubuntu 10.04 Lucid Lynx izay misy fiatraikany amin'ny fitaovana USB ary manakana azy ireo tsy hipetraka irery rehefa mifandray, midika izany fa tsy hiseho eo amin'ny birao ilay fitaovana ary tsy hanampy ao Nautilus.
En WebUpd8 ary ny tranonkala hafa dia milaza fa ny antony mahatonga ny olana dia fametrahana BIOS mifandraika amin'ny floppy drive-tsika. Mba hanamboarana azy, ny sisa ataonao dia ny famerenana amin'ny laoniny ny solosaina, ampidiro ny BIOS ary aiza no voalaza fa Floppy dia misafidy "Disabled" fa tsy "Legacy Floppy".
Vonona, manomboka izao, rehefa manamboatra Ubuntu ianao dia hiasa toy ny mahazatra ny volan'ny fitaovana USB ary hampandehanina any Nautilus izy ireo, araka ny tokony ho izy.
Nahavaha ny olanao tamin'ny fitaovana USB ve izany? Avelao ny hevitrao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Vahaolana iray hafa ho an'ny olan'ny fitaovana USB ao Lucid
Finery: lohahevitra tsara tarehy Lucid izay manatsara ny Radiance
Xubuntu: distro iray izay tsy nanisy fifandraisana intsony?